Soomaaliya, 28 February 2018
Arbaco 28 February 2018
Baladweyne: Rag Hubeysan oo Howl-gal Lagu Qabtay
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala gobalka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay hub iyo qalab loo adeegsado qaraxyada ka dib howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Baledweyne.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmana Ducaale Bayle ayaa sheegay in ay tahay in ganacsatadu ay bixiyaan canshuuraadka xaqa loogu leeyahay, si ay dowladdu u shaqeyso.
Libya: Tahriibayaal Kale oo Doonaya inay Soomaaliya ku Laabtaan
Danjiraha Soomaaliya u jooga dalka Libiya Muxyadiin Maxamed Kaalmooy ayaa VOA u sheegay inay diiwaan galinayaan qaybtii labaad ee dhalinyarada Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada dalka Libya, si ay dalkooda dib ugu celiyaan.
Dhageyso Barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 410-aad
Ku soo dhawaada barnaamijka Dhaqanka iyo Hiddaha oo uu soo jeedinayo Axmed Faarax Cali (Idaajaa).
Cadaado: Dad Cudurka Jadeecada la il Daran
Agaasimaha Cisbitaalka magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud, Maxamed Cumar Yuusuf ayaa sheegay in dad 100 qof kor u dhaafayaa ay la il daran yihiin xanuunkan Jadeecada.
Heshiiskii Ganacsatada iyo Dowladda ee Canshuurta oo Bur-burey
Ganacsatada gobolka Banaadir ayaa sheegtay inuu bur buray wada xaajoodkii u socday iyaga iyo wasaarada maaliyadda ee ku saabsana bixinta canshuuraha ,waxana ay xuseen in bur burka ku yimid wada hadalkaasi ay masuul ka tahay dowlada.
Puntland: Dhalinyaro Shabaab ah oo Baxsaday
Dhalinyaro tiradoodu gaadhayso 10 oo horey uga tirsanaa ururka Al-Shabab ayaa habeen hore ka baxsaday xarun lagu dhaqancelinayey oo ku taalla magaalada Garoowe sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinaca amniga ah.
AMISOM oo ka Hadashay Dil ay u Geysteen Askari Soomaali Ah
Gedo: Ciidamo Roondo Sameynayay oo Dhexda Loo Galay
Iska hor-imaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo, meel u dhow degaanka Faafaxdhuun.